Labada macallin ee ay Real Madrid dooneyso inay ku baddesho Zinedine Zidane oo la ogaaday – Gool FM
(Madrid) 31 Maarso 2021. Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya in Real Madrid ay ka baaraan degeyso tababaraheeda xiga haddii uu shaqada ka tago Zinedine Zidane oo aanu mustaqbalkiisa caasimadda Spain kala caddeyn.
Halyeyga Los Blancos ee Raul Gonzalez iyo macallinka xulka qaranka dalka Jarmalka ee Joachim Low ayaa ah bartilmaameedyada ugu sarreeya ee Real Madrid dooneyso inay ku baddesho Zidane.
Inkastoo kaliya lix dhibcood ay u jiraan hoggaanka horyaalka La Liga, sidoo kalena ay ciyaarayaan wareegga rubac-dhammaadka tartanka Champions League, misena ma cadda mustaqbalka tababaraha Faransiiska ah maadaama heshiiskiisa garoonka Santiago Bernabeu uu ka harsan yahay hal sano oo qura.
Zidane oo xagaagii 2018 mar iska casilay shaqada Real Madrid xukunkiisii ugu horreeyay ayaa wajahaya cadaadis kaga imaanaya maamulka kooxda kaddib natiijooyinkii liitay ee bilawgii xilli ciyaareedkan.
Majaladda AS ayaa qortay in Madaxweyne Florentino Perez iyo maamulkiisu ay doonayaan inay kala jiheystaan iyaga iyo Zidane, waxaana jariiradda Isbaanishka ah ay intaas raacisay in Los Blancos ay diiradda saareyso hoggaamiyaha kooxda da’yarta ee Madrid Castilla, Raul iyo macallinka xulka Germany ee Low kaasoo isaga tagaya shaqada xulkiisa marka uu dhammaado tartanka Euro 2020 ee qabsoomi doona xagaagan.
Raul oo Real Madrid u saftay 741 kulan waayihiisii ciyaareed ayaa tan iyo 2019 hoggaaminayay Castilla, waxaana loo arkaa inuu yahay baddelka Zidane, kaasoo kooxda yaryar ee Madrid macallin u ahaa ka hor 2016 xilligaas oo uu usoo dallacay kooxda waaweyn si uu shaqada kagala wareego Rafa Benitez.
Dhanka kale, Tababare Low ayaa noqon doona mid xor kaddib koobka qarammada qaaradda Yurub isagoo dhowaan xaqiijiyay inuu isaga tagayo shaqada xulka qaranka xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa labadan shaqsi u aragta macallimiinta baddeli karta Zidane haddii ay shaqada ka fasaxaan Zinedine Zidane.
Xiddig muhiim u ah Barcelona oo kusoo laabtay tababarka & xilliga uu kulankiisa xiga ciyaari doono oo la shaaciyay